On 4th May 2019, MYTCL Mobile Medical Team completedaregular healthcare visit to the Banenwechaung Village, with the MYTCL Mobile Medical Team Field Assistant, Daw Linn Linn Sein, working closely with the community.
The MYTCL Chairman, Mr. Zhang Yupeng, implemented the first Yangtse Star Award Program in 2018. The conception of the Yangtse Star is to feature an award reserved for honoring the best of the best.
ဘိန်းနွယ်ချောင်ကျေးရွာ CSR ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု့
၂၀၁၉ မေလ (၄) ရက်နေ့ တွင် မြန်မာယန်စီ အခမဲ့ကျန်းမာရေးဆေးကုသမှု့ အဖွဲ့မှ ဘိန်းနွယ်ချောင်ကျေးရွာသို့ သွားရောက်၍ ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့ပြီး MYTCL MMT Field Assistant, ဒေါ်လင်းလင်းစိန်းမှ ကျေးရွာ နှင့်အတူ နီးကပ်စွာ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် MYTCL ၏ ဥက္ကဌ Mr. Zhang Yupeng သည် ပထမအကြိမ်မြောက် ယန်စီကြယ်ပွင့်ဆုချီးမြှင့်ခြင်း အစီအစဉ် ကို အကောင်ထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ယန်စီကြယ်ပွင့် ဆု၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ အကောင်းတစ်ကာအကောင်းဆုံး ဆောင်ရွက်မှုအတွက် အသိအမှတ်ပြု ချီးမြှင့်သည် ဆုဟု ဆိုလိုသည်။
Banenwechauung village is remotely associated from direct mining activities and has had no impact from the S&K project.Nevertheless, it is the prerogative of MYTCL and MEHL to include this village in the CSR/CSD improvement budgets.